E nwere otu eze na ndị isi ga na-ekpe ikpe ziri ezi ma ha chịwa (1-8)
A dọrọ ụmụ nwaanyị na-anaghị eji ihe ọ bụla akpọrọ ihe aka ná ntị (9-14)
Ihe ọma ndị ga-emere ndị mmadụ mgbe Chineke ga-awụsa ha mmụọ ya (15-20)
32 A ga-enwe eze+ ọ ga-abụ, ya chịwa, onye ọ bụla ana-eme ezi omume,+A ga-enwekwa ndị isi ga na-ekpe ikpe ziri ezi ma ha chịwa. 2 Onye ọ bụla n’ime ha ga-adị ka ebe mmadụ na-agbaba ka o zere ifufe Nakwa ebe mmadụ na-agbaba ka o zere nnukwu mmiri ozuzo. Onye ọ bụla n’ime ha ga-adịkwa ka iyi na-asọ n’ala mmiri na-adịghị+Nakwa ka ndò nkume dị elu na-enye n’ala kpọrọ nkụ. 3 A gaghịzi anyachi anya ndị na-ahụ ụzọ. Ndị na-anụ ihe ga-egekwa ntị. 4 Ndị na-eme ihe ọkụ ọkụ ga-echebara otú ha ga-esi amatakwu ihe echiche. Ndị nsụ* ga na-ekwu ihe doro anya, okwu ana-agakwa ha were were n’ọnụ.+ 5 A gaghịzi asị na onye nzuzu na-amaghị Chineke bụ ezigbo mmadụ.* A gaghịkwa asị na onye arụrụala bụ ezigbo mmadụ. 6 Onye nzuzu ga na-ekwu okwu nzuzu. Ọ na-eche ihe ọjọọ n’obi ya+ n’ihi naỌ chọrọ ịkwụsị ife Chineke, fewe chi ọzọ,* chọọ ịna-ekwu ihe na-adịghị mma gbasara Jehova,Chọọ ime ka onye* agụụ ji ghara ịhụ ihe rie,Chọọkwa ime ka onye mmiri na-agụ ghara ịṅụ mmiri. 7 Otú onye arụrụala si eme ihe ndị ọ na-eme dị njọ.+ Ọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme omume na-eme ihere,Na-aghagidekwa ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha ụgha ka o mesie ha ike,+Ọ bụrụgodị na ha kwuru otú ihe si mee. 8 Ma, ezigbo mmadụ na-ebu ezigbo ihe n’obi. Naanị ihe ọ na-eme bụ ihe dị mma.* 9 “Ụmụ nwaanyị ndị weere na ihe a na-eme agbasaghị ha, bilienụ ọtọ gee ntị n’ihe m na-ekwu. Ụmụ nwaanyị na-ejighị ihe ọ bụla kpọrọ ihe,+ nụrụnụ ihe m na-ekwu. 10 Otu afọ na abalị ole na ole gachaa, ununwa, bụ́ ndị na-ejighị ihe ọ bụla kpọrọ ihe, ga-ama jijiji,N’ihi na oge ịghọ mkpụrụ vaịn ga-agacha, ma o nwebeghị nke a ghọtara.+ 11 Ụmụ nwaanyị ndị weere na ihe a na-eme agbasaghị ha, maanụ jijiji. Ndị na-ejighị ihe ọ bụla kpọrọ ihe, maanụ jijiji. Yipụnụ uwe unu gbara ọtọ,Keekwanụ ákwà iru uju n’úkwù.+ 12 Tienụ aka n’obi, beekwanụ ákwáMaka ihe mere ala dị iche iche na-eme nri na osisi vaịn nke na-amị mkpụrụ. 13 N’ihi na ihe ga-eju ebe niile n’ala ndị m bụ osisi bụ́ ogwu ogwu. Ọ ga-ekpuchi ụlọ niile a na-anọ enwe aṅụrị,Ya bụ, ụlọ ndị dị n’obodo a na-enwe ezigbo obi ụtọ.+ 14 N’ihi na ndị bi n’ụlọ elu a rụsiri ike agbapụchaala. Ndị mmadụ agbapụchaala n’obodo a na-eme mkpọtụ.+ Ofel+ na ụlọ nche tọgbọzi nkịtị. Ha bụzi ebe jakị ọhịa na-enwe aṅụrịNa ebe ìgwè ewu na atụrụ na-ata ahịhịa.+ Ha ga-adịgidekwa otú ahụ 15 Ruo mgbe Chineke ga-esi n’eluigwe wụkwasị anyị mmụọ ya,+Mgbe ala ịkpa ga-aghọ ubi a kụrụ mkpụrụ osisi,E werekwa ubi a kụrụ mkpụrụ osisi ka oké ọhịa.+ 16 N’oge ahụ, a ga na-ekpe ikpe ziri ezi n’ala ịkpa. A ga na-emekwa ezi omume n’ubi a kụrụ mkpụrụ osisi.+ 17 Ezi omume a ga na-eme ga-eme ka udo dị,+Meekwa ka ebe niile dị jụụ, obi eruokwa onye ọ bụla ala ruo mgbe ebighị ebi.+ 18 Udo ga-adị ebe ndị m ga-ebi. Obi ga-erukwa ha ala ebe ahụ. Ebe ha ga na-ezu ike ga-adakwa jii.+ 19 Ma, akụ́ mmiri ígwé ga-ebibi oké ọhịa. A ga-asụkwa obodo a akwụ. 20 Ndị na-akụ mkpụrụ n’akụkụ mmiri niileNa ndị na-atọpụ ehi na jakị eriri ka ha na-akpagharị na-enwe obi ụtọ.”+
^ Na Hibru, “Ire ndị nsụ.”
^ Ma ọ bụ “na-emesapụ aka.”
^ Ma ọ bụ “kwụsị ịsọpụrụ Chineke, sọpụwara chi ọzọ.”
^ Ma ọ bụ “imesapụ aka.”